RASMI: Xiddiga Isbuuca ee Champions League & Goolkii ugu quruxda badnaa ee todobaadkan laga dhaliyey tartankaasi oo lagu dhawaaqay – Gool FM
Haaruun September 20, 2019
(Yurub) 20 Sebt 2019. Waxaa la shaaciyey xiddigii ugu fiicnaa Champions League isbuucan iyo sidoo kale goolkii ugu quruxda badnaa ee todobaadkan laga dhaliyey tartankaasi xiisaha leh ee Koobka Horyaalladda Yurub.
Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay Kooxda Red Bull Salzburg ee Erling Haaland uu ku guuleystay xiddiga isbuuca ee Champions League kaddib markii uu saddexleey saxiixay todobaadkan.
Haaland ayaa abaal-marinta laacibka todobaadka ee Champions League waxa uu ku garaacay saddexda ciyaaryahan ee kula tartamayey oo kala ah Laacibka kooxda PSG ee Angel di Maria oo labo gool ugu shubay Real Madrid, Goolhayaha kooxda Barcelona ee Marc ter Stegen oo rigoore ka qabtay Marco Reus kooxdiisana hal dhibic u badbaadiyey & Ciyaaryahanka kooxda Dinamo Zagreb ee Mislav Oršić oo isna saddexleey dhaliyey Isbuucaan.
Dhinaca kale waxa uu xiriirka UEFA shaaciyey goolkiisii ugu quruxda badnaa Champions League isbuucaan, waxaana ku guuleystay xiddiga kooxda Juventus ee Juan Cuadrado.
Cuadrado ayaa abaal-marintan ku qaatay goolkii cajiibka ahaa ee uu ugu shubay Atletico Madrid waxaana uu ku garaacay xiddigaha kala ah laacibka PSG ee Angel di Maria oo ku tartamayay goolkii labaad ee uu ka dhaliyey Real Madrid, Wiilka Ajax ee Alvarez goolkii uu ka dhaliyey Lille iyo Lucas Moura goolkii uu ugu shubay Olympiacos kulankii barbaraha 2-2 ku dhammaaday.
🎯 Juan Cuadrado’s stunner wins it ! 👏👏👏#UCL #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/libqrxIWvo
“Frenkie de Jong wuxuu taariikh weyn ka sameyn doonaa Barcelona” – Xavi Hernandez